Maamulka Gobolka Hiiraan oo ku baaqay dadajinta Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baladweyne ( Mareeg)-Cabdifitaax Xasan Afrax Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dadajiyo maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa ku nuux nuuxsaday in Madaxda sare ee dowladda Federaalka Soomaaliya ay u tafa xeetaan dadajinta Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
“ dadku weli waxa ay u dheg raaricinayaan dhismaha Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe , waa in sida ugu dhaqsiyaha badan arrinteeda loo guda galo” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax.
Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa ayaa dib u dhac weyn uu ku yimid iyadoo dib u dhacaasi la sheegay in ay ugu wacantahay is qab qabsi guddiga Farsamada la xiriirta iyo weliba arrintii Mooshinka ka dhanka ahaa Madaxweynaha ee lalaalay.